people Nepal » “निर्वाचनका कुनै कार्यक्रम प्रभावित हुँदैन”- डा. अयोधीप्रसाद यादव “निर्वाचनका कुनै कार्यक्रम प्रभावित हुँदैन”- डा. अयोधीप्रसाद यादव – people Nepal
“निर्वाचनका कुनै कार्यक्रम प्रभावित हुँदैन”- डा. अयोधीप्रसाद यादव
काठमाडौँ, ३० कात्तिक। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनलाई असर पर्ने खालका सुरक्षा चुनौती आए पनि नेपाल सरकारले सुरक्षाको उच्च प्रबन्ध गरेकाले निर्वाचनका कुनै कार्यक्रम प्रभावित नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले निर्वाचनको तयारी अब मतदान केन्द्रित भएको बताउँदै संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचनलाई सफल पार्न सबैको सहयोग आवश्यक
नमुना मतदानमा मतदाता, मतदान अधिकृत, पर्यवेक्षक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भूमिकामा आयोगकै कर्मचारी खटिनुभएको थियो भने सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित हुनुहुन्थ्यो । गोरखापत्रमा खबर छ ।